Indlu yegadi kaStevey
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguStefania
I-villa ethule enegadi yabucala enkulu, kwindawo enobuchule ukutyelela indawo yaseFlegrea, eCuma, ePozzuoli, eNaples, kwiRoyal Palace yaseCaserta. Isisombululo sezindlu sinconywa kwiindwendwe ezifika ngemoto. Mna ngokwam ndizakwamkela iindwendwe
I-villa ethule enegadi yabucala enkulu, kwindawo enobuchule ukutyelela indawo yaseFlegrea, eCuma, ePozzuoli, eNaples, kwiRoyal Palace yaseCaserta. Isisombululo sezindlu sinconywa kwiindwendwe ezineemoto. Mna ngokwam ndizakwamkela iindwendwe.
Kummandla okufutshane wePareo Park, eyona paki inkulu yokuzonwabisa eMazantsi e-Itali. Kummandla okufutshane wePareo Park, eyona paki inkulu yokuzonwabisa eMazantsi e-Itali
Ujikelezwe buhlaza, umgama omfutshane ukusuka elunxwemeni naselwandle, kwindawo ecwangcisiweyo yokunxibelelana neziqithi zase-Ischia kunye neProcida, uya kuchitha iholide yokuhlaziya kwindlu yasegadi yaseStefy.